कुर्सी गुम्ने निश्चित भएपछि ओलीले चीन गुहारेकाे खुलासा, प्रचण्डलाई एकाएक आयो यस्तो चिनियाँ दवाव, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
कुर्सी गुम्ने निश्चित भएपछि ओलीले चीन गुहारेकाे खुलासा, प्रचण्डलाई एकाएक आयो यस्तो चिनियाँ दवाव, अब के हुन्छ ?
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवादमा चीनले हस्तक्षेप गरेको खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन प्रचण्ड र माधव नेपाल समुह सक्रिय भएको चर्चा चर्चा चलेका बेला यस्तो खुलासा भएको हो ।
नेकपा उच्च स्रोतले इमान्दार मिडियालाई दिएको जानकारी अनुसार ओलीको बिरुद्ध नजान प्रचण्डलाई चिनियाँ पक्षले दवाव दिएको छ । चिनियाँ पक्षले आफ्नो प्रतिनिधि प्रचण्डलाई भेट्न पठाएर ओलीबिरुद्ध नलाग्न भनेको बुझिएको छ । सोमबार मात्रै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग टेलिफोन बार्ता गरेकी थिइन । राष्ट्रपति द्वय भण्डारी र सीको टेलिफोन कुराकानीपछि चिनियाँ पक्षले आफ्नो विस्वास पात्र पठाएर प्रचण्डलाई भेट्न लगाएको स्रोतले बतायो ।
ति व्यक्तिले अर्का नेकपा नेता माधव नेपाललाई पनि ओलीसँग मिलेर जान सुझाव दिएको बुझिएको छ । सोमबार ओली र नेपालबीच दिनभर छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन । छलफलका क्रममा ओलीले नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेका थिए तर नेपाल भने ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने अडानमा छन् ।
यता प्रचण्डले पनि ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा दिएर आराम गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले पनि सोमबार नेकपाकानेता बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसंग छलफल गरेका थिए । छलफलले कुनै ठोस निर्णय निकाल्न भने सकेन । प्रचण्ड माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर आफु पार्टीको एकलौटी नेतृत्व लिने दाउमा रहेको पूर्व एमाले नेताहरुको भनाइ छ ।
अध्यादेश प्रकरणपछि अप्ठ्यारोमा परेका ओली बहुमत सदस्यको माग बमोजिम स्थायी समिति बैठक बोलाउन अझै आलटाल गरिरहेका छन् । बैठक बोलाए आफ्नै निर्णयका कारण आफूविरुद्धकै निर्णय आउनसक्ने देखेर ओलीले बैठकप्रति अनिच्छा देखाएका हुन् । ओली अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद पनि नछाड्ने पक्षमा छन्।
बरु मन्त्रिपरिषदका सदस्य र मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्नसक्ने विकल्प अघि सारेर उनले असन्तुष्ट नेताहरुलाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् । पार्टीभित्र ओलीका विरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरु प्रस्टसँग ध्रुवीकृत भैसकेका छन् ।
नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । स्थायी समितिमा पनि पूर्वमाओवादी पक्षको झण्डै ४५ प्रतिशत र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम सहितका नेताहरुको जोड्दा प्रचण्ड बहुुमत विपक्षमा देखिन्छ । यस्तो अवस्था देखेरै ओली स्थायी समिति बैठक तत्काल बोलाउन तयार नभएका हुन् ।
ओलीको हेपाहा र मनलाग्दी निर्णयबाट वाक्क भएका असन्तुष्ट नेताहरु उनी नसच्चिए संसदीय दलमै अविश्वास प्रस्ताव समेत लान पछि नपर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् । असन्तुष्टहरुको यस्तो तयारी बुझेका ओली पनि संसदीय दलको हिसाबकितावमा जुटेका छन् । उनको हिसावकितावअनुसार आफ्नो पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत पुग्छ भन्ने नै छ ।
समस्या समाधानका लागि सोमबार दिनभर भएका वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि मंगलबार समेत एकपक्षीय दुई पक्षीय र दुई पक्षीय वार्ताले निरन्तरता पाउने भएका छन् । सोमबार दिनभर कहिले बालुवाटारमा ओली र नेपालबीच वार्ता भयो भने नेपाल र प्रचण्डबीच पनि वार्ता भए । खनाल, प्रचण्ड र ओली तथा केही सुदूरपश्चिमका सांसदहरुबीच समेत वार्ता भयो । सांसदहरुसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुक पेजमा लेखे, ‘फुटवलमा गोल गर्नुको र राजनीतिमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुको भिन्न महत्त्व हुन्छ’, थापाले नेकपा अरु नेताहरुलाई राजनीतिलाई फुटवलको गोलजस्तो नसम्झन चेतावनी दिएका छन् ।
खासगरी वैशाख ८ को अध्यादेश जारी तथा बैशाख १२ मा अध्यादेश फिर्ता प्रकरणपछि ओलीविरुद्ध पार्टीभित्रको मत बलियो बन्दै गएको हो । ओलीको विकल्प खोज्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम समूह एकै ठाउँमा उभिएपछि यो समीकरणलाई जसरी पनि भत्काउने प्रयासमा बालुवाटार लागेको छ ।
नेकपाको ४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रचण्ड र नेपाल समूहका ३२ सदस्य छन्। ४४ मध्ये ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, सत्यनारायण मण्डल, शंकर पोखरेल र सुवासचन्द्र नेम्बाङ मात्रै छन्। पहिला ओलीको पक्षमा खुलेका महासचिव पौडेल अहिले स्पष्ट खुलेका छैनन् । ओलीलाई साथ दिँदै आएका परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली समेत अध्यादेश प्रकरणमा ओलीको विपक्षमा उभिएका थिए ।
सचिवालयको एजेन्डा नै ‘स्थायी कमिटी बैठक’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ बालुवाटारमा आफू निकटका सांसदहरूसँग अति लचक भएर अध्यादेश फिर्ता गर्दा पनि नैतिकताको कुरा उठाउँदै राजीनामा मागेर षड्यन्त्र गरिएको गुनासो सुनाए ।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि ओलीले यही आशयको कुरा गरेका थिए । उनले दाहालसँगको भेटमा कसैको दबाब आउँदैमा आफूले सरक्क कुर्सी छाडेर नहिँड्ने बताएको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘पहिले अध्यादेश फिर्ता लिनुस् भन्ने, पछि फेरि राजीनामा दिनुस् भन्ने,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यो कहाँको नैतिकताको कुरा भयो, तपाईंहरूले मिलेर मलाई हटाउन षड्न्त्र गर्नुभएको हो ।’
करिब २ घण्टा चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले विषयवस्तु अलिकति मत्थर नहुँदासम्म पार्टीका कुनै पनि संगठनको बैठक आह्वान नगर्न प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालले भने बैठक बोलाउन दबाब नै आएकाले एकछिनका लागि भए पनि आह्वान गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नुअघि बिहान दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा नेपाल निवास कोटेश्वरमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा नेपालले प्रधानमन्त्रीले आफूले सृजना गरेको समस्याको निकास आफैंले दिनुपर्ने बताएका थिए ।
‘मेरो अडानमा म टसको मस छैन, ओलीजी बैठक बोलाएर जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ,’ दाहालसँग नेपालले भनेका थिए । त्यसपछि दिउँसो बालुवाटार पुगेका दाहाल र ओलीबीच बैठक बोलाउने सहमति भएको हो । बुधबार साँझ ५ बजे बस्ने सचिवालयको मूल एजेन्डा नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक हुने सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीबारे स्थायी कमिटी सदस्यहरूले जवाफ खोजिरहेका छन्,’ खनालले कान्तिपुरसँंग भने, ‘हामी छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्छाैं ।’
सचिवालय बैठक नै तत्काल डाक्न नहुने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठकका लागि सजिलै तयार हुने देखिएका छैनन् । त्यसको संकेत स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि गरेका छन् । ‘पार्टीमा समस्या आइपर्छन्, मतभेद हुन्छ, ती मतभेद अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर एक किसिमको सहमति जुटेपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता ज्ञवालीले भने, ‘परिस्थिति तातो भएका बेला बैठक बस्दा सही परिणाम दिन्छ भन्न सकिन्न ।’ ज्ञवालीले एउटा विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनसम्मबारे छलफल चल्नु दु:खद भएको बताए ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरूको चर्काे दबाबका कारण अहिले सचिवालय बैठक मात्रै गर्ने स्थिति नरहेको नेता खनालले बताए । त्यसैले बुधबार साँझको सचिवालय बैठकमा ओली र उनीइतरका पक्षहरूबीच रस्साकस्सी हुने देखिएको छ । अहिलेसम्मका ‘वान टु वान’ बैठकहरूमा ओलीले अध्यादेश गल्ती भएर फिर्ता गरेको भन्दा पनि नेताहरूको आग्रहमा फिर्ता गरिएको भन्दै त्यो विषयलाई अरू धेरै नचर्काउन आग्रह गरिरहेका छन् । उनले सोमबार साँझ सांसदहरूको छलफल र मंगलबार दिउँसो दाहालसँगको भेटमा पनि बरु जस्तोसुकै परिस्थिति सामान गर्ने तर नझुक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
ओलीसँगको छलफलपछि दाहाल मंगलबार साँझै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न उनको निवास भैंसेपाटी पुगेका थिए । त्यहाँ पनि दाहालले गौतमको अहिलेको पोजिसन के हो भनेर बुझेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो अडानबाट विचलित नभएको वामदेव कमरेडले प्रचण्ड कमरेडलाई बताउनुभयो,’ गौतमनिकट स्रोतले भन्यो ।
गत ११ गते गौतमकै निवासमा भएको सरकारबाहिर रहेका सचिवालय सदस्यहरूको भेलाले अब ओलीले काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यहीअनुसार गौतमले ओलीलाई ‘अब तपाईं आराम गर्नुस्’ पनि भनेका थिए । ‘भै‌ंसेपाटी भेलाकै स्पिरिटअनुसार एजेन्डा अघि बढ्छन्,’ एक सचिवालय सदस्यले भने ।
प्रत्येक गुटमा दुई धार
अध्यादेश प्रकरणका कारण नेताहरूबीच विवाद बढेपछि नेकपाभित्रका विषेशगरी तीनवटा गुटमा आ–आफ्नो हिसाबकिताब चलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका तीवटा गुटभित्रै नेताहरू दुई धारमा देखिएका छन् । तीनवटै गुटमा एकथरी नेताहरू आफ्नो अडानबाट टसको मस नभई अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छन् भने अर्काथरी पार्टी एकतालाई जोगाउन मिलेर जानुपर्ने धारणा राख्छन् । झन्डै एक सातायता चलेको यो रस्साकस्सीमा नेताहरूले औपचारिक रूपमा आफ्नो गुट परिवर्तन भने गरेका छैनन् ।
ओली समूहमा एकथरी नेताहरू यो समयमा सरकार बदल्ने खेल खेलेको भन्दै आक्रोशित छन् । उनीहरूले दाहाल र नेपालले जे कदम चाल्छन्, त्यसको सामना गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि आफूले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा त्यसैलाई मुद्दा बनाएर भिड्न खोजेको भन्दै आउन सक्ने सबै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको आफूनिकट नेताहरूलाई बताइरहेका छन् ।
सोमबार सांझ आफूनिकट सांसदहरूसँगको छलफलमा ओलीले आफ्नो सदासयतालाई नमाने परिस्थिति जे पनि हुन सक्ने धारणा राखेका थिए । तर ओली समूहभित्रका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेता कमीकमजोरी भए समीक्षा गरेर जानुपर्ने तर सरकार फेर्नका लागि आउने विकल्पलाई रोक्नुपर्ने पक्षमा छन् । एकअर्काविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई केही मत्थर पार्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
नेपाल समूह अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नजिक छ । तर नेपाल नेतृत्वको पूर्वसमूह यथावत् रहेकाले उनीहरूबीच पनि छुट्टाछुट्टै समीक्षा हुने गरेको छ । यो समूहभित्र स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर गर्ने नेता ९ जना छन् । उनीहरू बैठक बोलाउने, ओलीको विकल्प खोज्नेदेखि अहिले कुनै पनि हालतमा ओलीसँग झुक्न नहुने धारणा राख्छन् ।
नेपाल धारका मन्त्रीसमेत रहेका नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईले अहिले नै ओलीको विकल्प तयार गरी सरकार बदल्ने दिशामा जाने बेला नभएको धारणा राखिरहेका छन् । ओलीलाई सच्चाउने, उनले केन्द्रित गरेका केही अधिकारलाई पार्टीको सिस्टमबाट चल्ने गरी अघि बढाउने गरी जानुपर्ने उनीहरूको राय रहेको स्रोतले बताएको छ । अहिले नै आन्तरिक झगडा चर्काउँदा पार्टी समस्यामा पर्ने बुझाइ उनीहरूको छ ।
अध्यक्ष दाहालको समूहमा पनि धेरैजसो नेता ओलीको विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राख्छन् । स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग गर्ने नेताहरूले आफ्नो अडान छाडेका छैनन् । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने मिलेरै जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले सोमबारदेखि ओलीको विकल्पमा खोज्ने बेला नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोलिदिएपछि दाहालको समूहमा तरंग आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादी समूहका अन्य नेताहरूसँग पनि भेटघाट गरिरहेका छन् । मंगलबार उनले राष्ट्रियसभामा रहेका नेकपाका नेता दीनानाथ शर्मालाई भेटे । शर्माले पनि अहिले पार्टी एकताले संस्थागत रूपमा नलिइसकेको अवस्थामा एकले अर्काका विरुद्ध जाँदा त्यसले झन् ठूलो समस्या ल्याउने धारणा राखिरहेका छन् ।